Vídeo | Page 8 | UNFPA Myanmar
ချမ်းမြေ့ သာယာ သားဆက်ခြား နည်း လမ်း လေ့လာပါ
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးကုသပေးရေးအဖွဲ့ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျေးရွာဆေးခန်းလေးဟာ နေရာလွတ်မကျန်အောင် လူအုပ်ကြီးနဲ့ပြည့်ကျပ်လို့နေပါပြီ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မက်ဆင်ဂျာကနေ မိဘပြည်သူတွေကို ဒီလိုသတင်းကောင်းပေးထားလို့ပါပဲ။ “လက်မောင်းအရေပြားအောက် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရတဲ့ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေ ဒီကနေ့ ရွာဆေးခန်းမှာ ရနိုင်ပြီနော်။”
Video of umeol9aevc4
ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ဟာ မိသားစုစီမံကိန်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက် ကားငယ်လေး တစ်စီးငှားပြီး မိန်းကလေးငယ်တွေ ဆေးခန်းလေးဆီကိုရောက်လို့လာပါတယ်။ ဆေးခန်းကအပြန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ပျော်ပျော်ပါးပါး မြို့လေးအတွင်းမှာ လျှောက်လည်ကြပါမယ်။
Video of lwmj5e3z3SM
One day,agroup of girlfriends in Myanmar’s remote Chin State borrowedapickup van. They were going onaday trip to find out more about contraceptives and to haveafun day in town.
Video of 2WBSZsMAnlk
Without an education, Nang Sai had little hope for her future in Myanmar. But through vocational training, she turned herself intoaleader. “Now I am creating my own destiny.”
အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းလိုပါတယ်
နန်းဆိုင်ဟာကျောင်းဆက်တက်ခွင့်မရခဲ့လို့ အနာဂါတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်မွေးပညာရပ်ကို သင်ယူလေ့လာခွင့်ရပြီးတဲ့နောက် ရပ်ရွာအကျိုးကို တက်ကြွစွာ သယ်ပိုးတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။ “အခုတော့ ကျမရဲ့အနာဂါတ်ကိုကျမကိုယ်တိုင် အကောင်းဆုံးပုံဖော်တတ်နေပါပြီ။”
Video of Q-P7erXVgDI
Kyae wantsasecond child. Just not yet. “My job and my income are important to me too”, she says.
Thanks to voluntary family planning, millions of women in Myanmar are empowered to decide how many children to have, and when to have them.
Video of eyyOSonEaKU
ကိမ်နိုင် ဒုတိယမြောက်ရင်သွေး ရယူလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ယူနေဆဲပါပဲ။ “အလုပ်နဲ့ဝင်ငွေ ဖူလုံမှုကလည်း ကျမအတွက် အရေးကြီးတယ်လေ။”
မိမိဆန္ဒအလျောက် ရင်သွေးရယူနိုင်သည့် မိသားစုစီမံကိန်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးသန်းပေါင်းများစွာက မည်သည့်အချိန်မှာရင်သွေးရယူမည်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နေကြပါပြီ။
Video of 4AyWL4O5lQ8
When Hlei was pregnant with her third child, the midwife detectedaserious complication. Every year, 2,800 women in Myanmar die in childbirth and pregnancy, but Hlei survived. The correct diagnosis byaskilled midwife made the difference between life and death.
Video of iJBWt_2-Ypg
ငွန်းလဲ တတိယအကြိမ် ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည့်အခါ သားဖွားဆရာမက ငွန်းလဲ ကိုယ်ဝန်မှာ ပြသနာကြီးတစ်ခုရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် အမျိုးသမီး ၂၈၀၀ ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ မသေဆုံးသင့်ပဲ သေဆုံးနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွန်းလဲကတော့ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သားဖွားဆရာမရဲ့ ကုသစောင့်ရှောက်မှုက ငွန်းလဲရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Video of 7sY_WwHBg5c
အသက် ၁၅နှစ် အရွယ်မှာ သီရိ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားနေရပါပြီ။ “ကျမတို့နှစ်ဦး ချစ်သူဘ၀ ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို အဲ့ဒီတုန်းက ကျမ မစဉ်းစားတတ်ခဲ့ဘူး။”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၅၀၀၀၀ ခန့်မျှသော ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်များ နှစ်စဉ်ကလေးမွေးဖွားကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေ ရံပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA သည် သီရိနှင့်သူမချစ်သူ ကဲ့သို့သော လူငယ်များ အချိန်လွန်ခါမှ နောင်တမရစေမည့် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်အောင် လိင်မှုရေးရာ ပညာပေးအစီအစဉ်များကို အားပေးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။